Maalimaa - LibreOffice Help
1 Ogeejjii Tokkee/Lamee
3 Tuuta Dalagaalee
9 Mallattoole kabiroo
10 Fakkeenyoota LibreOffice Math
Foormulaa herregakee ijaaruuf ogejjii tokkee fi lamee adda addaa LibreOffice filachuu dandessa. Tokkeen ogeejjii iddooqa tokkoo warra dhiibbessaan agarsiisa. Lameen ogeejjii iddooqa lama warra walindhi'an agarsiisa. Foddaan filmaata naannoo gadaana ogeejjii kophaa agarsiisa. Baafatni Halqara foddaa Ajaja tarree ogeejjii kana akkasumaas ogeejjii dabalatas of keessatti qaba. Yoo ogeejjii foddaa filmaata irraa hin jirre barbaaddee, baafata halqara fayyadami yookan foddaa Ajaja keessaatti kallattiin bareessi.
Hariiroowwan heedduu jiraan keessaa caasaa LibreOffice Math foormulaakee filachuu dandeessa. Foddaa Foormulaa Maalimootaa kutaa gadaana keessatti dalagaan hariiroo ni agarsiifama. Tarreen kunis baafata halqara foddaa Ajajaa keessattis ni argamu. Hariirroowwaan mara fodda Foormulaa Maalimootaa yookaan baafata halqara keessatti hin qabatamiin hujeekaan foddaa ajajaa keessatti barreessu ni dandeessas.
Arfiilee foormulaa LibreOffice Math kee keessaa tuuta ogeejjiilee adda addaatti ramadi. Ogeejjiileen tokkoon tokkoon gola gadaana foddaa Foormulaa Maalimootaa keessatti ni mul'atu. Tarree walfakkaata dalagaalee tokkoon tokkooni laaluuf bafaata halqara foddaa Ajajaa keessatti bilbilaa.Ogeejjiileen kamiyyuu foddaa Foormulaa Maalimootaa keessatti hin argamnee kallattiin foddaa Ajaja keessatti galchamu qabu. Mallattooleen isaani dursanii yoo jiraataniyyu, atii kutaalee biroo foormulaa kallattiin saagu ni dandeessa.
Dalagaalee foddaa gara gadaana keessaa filii. Dalagaaleen kunnis baafata halqaraa foddaa Ajaja keessattis tarreefamaniiru. Dalagaalee kamiyyuu fodda Foormulaa Maalimootaa keessatti hin hammatamne hujeekan foddaa Ajaja keessatti barreefamu qabu.
Ogeejjiiwwan heedduu jiran keessaa caasaa LibreOffice Math foormulaa kee filachuu dandeessa. Foddaa Foormulaa Maalimootaa gadaana keessatti ogeejjiin jiran marri ni mul'atu. baafata halqara fodda Ajaja keessattis tarreefamaniru.s Ogeejjiwwan mara fodda Foormulaa Maalimootaa yookaan baafata halqara keessatti hin qabatamiin hujeekaan foddaa Ajajaa keessatti barreessu ni dandeessas.
Amaloota heeddu jiran keessa LibreOffice Math foormulaaf filachuu ni dandeessa. Amalootni baay'een foddaa Foormulaa Maalimootaa gara gadaana keessatti ni agarsiifamu. Amalootni kunis baafata halqara foddaa Ajaja keessattis tarreefamaniiru. Amalootni marri foddaa Foormulaa Maalimootaa ykn baafata halqara keessatti hin qabatamiin foddaa Ajaja keessatti hujeekan barreefamu qabu.
Foormulaa LibreOffice Math caasessuuf sadalla gosa heedduu jiran keessaa filachuu ni dandeessa. Gosti sadallaa foddaa Foormulaa Maalimootaa kutaa gadaana keessatti ni agarsiifama. Sadallaan kunis baafata halqara foddaa Ajaja keessattis tarreefamanii ni argamus. Sadallaa mara foddaa Foormulaa Maalimootaa ykn baafata halqaras keessatti hin qabatamiin hujeekaan foddaa Ajaja keessatti barreessu ni dandeessa.
Foormulaa LibreOffice Math dhangeessuuf dirqala heeddu jiran keessaa filachuun ni danda'ama. Filmaatni dhangii foddaa Foormulaa Maalimootaa gadaana walakka keessatti ni agarsiifama. dirqalaleen kunis baafata halqara foddaa Ajaja keessattis tarreefamaniiru.
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=Math/Elements/om&oldid=1933024"